Kugcine entwasahlobo wochwepheshe futhi bezinwele ozinikezele bajwayelane izitayela ezintsha e izinwele kanye izimonyo ekwindla isizini - entwasahlobo 2013. Qaphela ukuthi izinguquko eziphawulekayo babe imibala kuphela. Kuphakanyiswa ukuba usetshenziselwe ukudaya izinwele bonke shades of orange futhi ebomvu kanye pink, Lilac, burgundy. izixazululo kule sizini wathatha phezu engokwemvelo, Nokho, ekugcineni bathambekele a yokuncishiswa ezithile.
zezinwele Trendy ngoba nezinwele ezimfishane, uma kulinganiswa nokwenu nyaka, cishe zinjalo. Kuyinto bonke a bob bendabuko efanayo, i-bob zakudala zonke ukuhluka. Sifaneleka ikakhulu nezinwele ezimfishane okomfana lapho imicu yesikhashana futhi occipital izinwele azifinyezwanga kakhulu. Lihambisana engavamile izinwele umbala, izinwele style Uyi ziphuzo zazihluzwa esihle kakhulu ubufazi obucayi isibindi kwakwakhiwa. Kuhlaba umxhwele ngokukhethekile like haircuts elifushane izinwele ukubukeka, kuhlangene Palette umbala abe ngawamatshe - shades abomvu.
Angazi uhlale kude nemfashini nezinye inguqulo eyisisekelo - "cap" (izinwele zobude obulinganako). On isisekelo bayo, wochwepheshe ngikudalile zezinwele ewubuciko, lokho - okufanayo besilisa imodeli "poluboks". Ibuye ibe imibala kunazo ezingalindelekile, kusuka elikhanyayo-platinum emthunzini blonde, lona kanye uju lwezinyosi ezithambile - amber tints.
ethandwa kakhulu isizini entsha kuyoba zezinwele yasekuqaleni izinwele emifushane (abesifazane ngisho amadoda) oluxube asymmetry. Isisekelo bayizinkulungwane bonke onobuhle efanayo classical. Technique zingase zihluke. Wamukelwa njengoba ecacile futhi abushelelezi isithombe umugqa kubekwa, futhi imiphetho Ragged kwakhiwa tapering ngendlela. Ngo zezinwele madoda ligxile esiphongweni eside.
Ngokuvamile, imfashini zezinwele for izinwele iDemo kule sizini avame ukuba Retro. Nokho, zabuna ngakho ungadikibali isikhundla salo. Akayikhohliwe, kanye kwakwakhiwa kakhulu ucwaningo amateur. Bona wochwepheshe ukunikela avant-garde izixazululo, owawusekelwe kokubili izinwele, futhi wakhe i lwemibala okungavamile.
Mahhala futhi kulula, stylish nenhle, ukhombise impilo futhi zokudala. haircuts lwalo nyaka nezinwele ezimfishane abazobe ezahlukene. Nokho, ngesinye sezinqumo kubahlanganisa njalo. Kuyinto engenakwenzeka ukucabanga kwekhanda ngaphandle esiphongweni. Nokho, izintokazi eziningi azi kahle ukuthi kuyingxenye ebalulekile yalesi kuzoncika umphumela zezinwele bebonke.
Ngosizo esiphongweni okuqoqiwe kahle kungenziwa kalula ukulungiswa kwamaphutha ukubukeka ukugcizelela isithunzi sabo. Ngaphezu kwalokho, ngendlela elula okunjalo ukuxazulula inkinga izinwele mncane futhi abangalawuleki. Udinga nje kuphela ukwazi imithetho.
Ngokwesibonelo, esiphongweni thinning kahle okwaziyo futhi ngesikhathi esifanayo kudala ukubonakala ivolumu. Ngaphezu kwalokho, imigqa engalingani ukuthambisa izici ezinkulu.
Bangs umkhumbi, kuze kube maphakathi esiphongweni sakhe, ngakolunye uhlangothi kuyinto ekahle unodoli ubuso. Sula, be-Jomethri design imigqa kwenza izici bazwakale, egcizelela amehlo.
Uma ucabangela omagazini zezinwele for ezimfishane ukuthi wochwepheshe ukunikela nathi isizini entsha, cishe waqaphela yini ukuthi ngokuvamile kunezindlela isigwebo kuzo zonke izimo. ikhanda okunjalo kumafomu zakudala ulungisiswa. Lokhu kwekhanda evumelana noma yiluphi uhlobo lomuntu. Kubalulekile kuphela ukukhetha ubude kwesokudla izinwele futhi esiphongweni. Imfashini kakhulu isizini ezayo kuyoba ongakhetha bob engalingani. Ligcizelela phezu esiphongweni etshekile, ngenkathi ngendlela ukugunda izinwele uhlala geometrically olunembile.
Umthamo izinwele uhlala nokulinganisela bagxila ikakhulukazi endaweni occipital.
Wonke umuntu ofuna ukuba ukhululeke futhi kulula, kodwa stylish nenhle, abalungisa izinwele ukunikela zezinwele nemfashini - yokuqala, edaliwe, zakudala. Khetha ukunambitheka yakho futhi sibe bahle njalo.
Yiziphi zezinwele ongakwenza ku nezinwele ezimfishane
Gagry, umkhakha wangasese: ukubuyekezwa kwamaholide